Xeerka quseeya gunooyinka howl-gabka ah ee la siiyo wasiiradii hore oo wax laga baddelayo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xeerka quseeya gunooyinka howl-gabka ah ee la siiyo wasiiradii hore oo wax laga baddelayo
Publicerat fredag 26 augusti 2016 kl 13.09
Dowladda ayaa dooneysa in ay wax ka baddesho xeerka quseeya dhaqaalaha howl-gab ee la siiyo wasiirada xukumadda horey uga tirsanaan jiray.
Maanta wasiiradii hore waxaa u suurto-gal ah in iyagoo qaadanaya lacagta howl-gab wiirada hadana uu dhaqli ka soo galo shirkad ay leeyahiin. Lakiin hadda wasiirka shibilka Ardalan Shekarabi ayaa hadda doonaya in gebi ahaanba arrintan uu meesha ka saaro. Ma ahan mid waafaqsan wax dadka Sweden filayaan, ayuu yeri wasiirka Ardalan Shekarabi.
- Teori ahaan maanta waa u suurt-gal in wasiir hore uu qaato guunada howl-gabka ee la siiyo wasiiradii hore iyadoo uu isla markaana dakhaqli ka soo galayo shirkad uu goni u leeyahay balse dhaqli soo gala uusan waxba ka dhimeyn in gunada howl-gabka ee uu qaato, ayuu yeri wasiirka shibilka Ardalan shekarabi.
- Ma waafaqsana wax dadka Sweden naga filayaan, mana waafaqsana damaca laga lahaa xeerka. Sidaas daraadeed waxaan wax ka baddeleynaa xeerka quseeya dakhliga uu qofka gashto shirkaddiisa, waxaan dooneynaa in lagu xisaabiyo oo ay saameyso gunada howl-gabka ah ee la siiyo wasiiradii hore, ayuu yeri Ardalan Shakarabi.
Gunadda howl-gab ee wasiirada hore waxaa la siiyaa qofkii horey uga tirsanan jiray golaha wasiirada oo da'diida tahay ugu yaraan 50 jir marka uu xilka ka dagayey oo golaha wasiirada horey uga soo tirsanaan jiray ugu yaraan lix sanno. Haddii wasiirkas hore ay markas soo gasho dakhlig kale wax saameyn ah kuma yeelanayo gunada howl-gabka ah ee uu ka heli dowladda. Balse wasiirka arrimaha shibilka ayaa hadda doonaya in uu middas wax ka baddelo, laakiin wax ka baddelkas waa in uu horkeena golaha baarlamaanka si ay u meel marto oo sharci u noqoto. Waa la arki doonaa barlaamaanka. Xeel-dheerayasha qaarkood ayaa saadaalinaya in wax ka baddelka xeerkan uusan meel marin doonin baarlamaanka.